Kitra – Bongolava : Nokorontanin-dramatoa Nirina ny fifidianana -
AccueilVaovao SamihafaKitra – Bongolava : Nokorontanin-dramatoa Nirina ny fifidianana
Kitra – Bongolava : Nokorontanin-dramatoa Nirina ny fifidianana
Na dia nokorontanina aza, dia tanteraka ihany ny fifidianana izay ho filoha hitantana ny seksiona Bongolava eo amin’ny taranja baolina kitra. Raha ny fampitam-baovao mantsy, dia nisy ramatoa nisandoka ary nilaza fa solontenan’ny komity mpanomana fifidianana (CE) antsoina hoe Nirina saika hibaiko, ary hitantana ny fifidianana tao Bongolava. Voalaza fa niaraka tamina zandary ity ramatoa ity tamin’izany, ary nanakorontana ny fifidianana saika hotanterahina. Nilaza mantsy ity ramatoa mpisandoka ity tamin’izany fa klioba miisa valo eo amin’ny diviziona voalohany ihany no mahazo mifidy amin’ireo klioba miisa 21 manana ny fahazoan-dalana ara-panjakana sy taratasy mampiasa azy ireo ara-dalàna. Ity ramatoa Nirina ity anefa tsy manana taratasy manamarina azy ho solontena avy amin’ny CE sy maniraka azy ara-dalàna hanatanteraka izany asa fitarihana sy fibaikoana fifidianana izany. Voalaza hatrany fa rehefa avy nanakorontana ity ramatoa mpisandoka ity, dianilaza fa hanatanteraka fifidianana eny amin’ny prefektiora-n’ny Faritra Bongolava, ary nitondra ireo klioba dimy izay nanaraka azy.
Tetsy ankilany anefa, tontosa soa aman-tsara ihany ny fifidianana filoha hitantanana ny seksiona Bongolava izay nanaovan’ny mpisoloky antsonjay. Tratra ny “quorum” ahafahana manatanteraka ara-dalàna ny fifidianana, ary dia niroso tamin’izany ireo komity, izay natrehin’ny solontenan’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena. Klioba 13 tamin’ny 21 no tonga nifidy tamin’izany, ary nibata fandresena 100% ny kandidà. Izany hoe, nahazo vato 13 tamin’ireo klioba 13 tonga nifidy ity kandidà ity.
Marihina fa nisy nanao fitarainana tamin’ireo klioba 21 voamarina fa manana taratasy fiasana ara-dalàna. Noho izay indrindra, dia andrasana ny valinteny avy amin’ny kaomision’ny fitarainana.
Mazava. Efa eny amin’ny Fitsarana avokoa ny raharaha rehetra mahakasika ny fanodinkodinam-bola goavana, amina miliara maro, teo anivon’ny orinasa Jirama nandritra ny fitondrana Tetezamita. Raha ny fanazavana azo teo anivon’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly ...Tohiny